Ny serivisy mozika streaming Tidal, azo alaina ao amin'ny Apple TV | Avy amin'ny mac aho
Azo atao ao amin'ny Apple TV izao ny serivisy mozika streaming tidal
Andro vitsy lasa izay, nanako ny rafitra vaovao iray izahay izay nanambarana fa afaka nanisa ny androny ny serivisy mozika mivantana, satria lany ny vola hahafahany mandoa orinasa sy mpanakanto firaketana nanomboka tamin'ireny dia nahazo vola bebe kokoa noho ny azony tamin'ny fifaninanana serivisy mivantana mivantana, toa ny Apple Music sy Spotify.
Araka ny efa nampoizina dia namaly an'ity fampahalalana ity i Tidal tamin'ny fandavana an-tsokosoko azy io, araka ny nandrasana, tsy nisy fanazavana momba ny toe-bolan'ny orinasa, toe-javatra ara-bola izay nahasarika ny saina hatrany, noho ireo mpanjifa vitsy an'isa. Mandritra ny adihevitra i Tidal, eo anelanelan'ny fijanonana misokatra na ny fanidiana ny chiringuito, ny orinasa dia nandefa fampiharana ho an'ny Apple TV.
Araka ny hitantsika amin'ny famaritana ny kinova ho an'ny Apple TV:
Miaraka amin'ny Tidal for Apple TV dia hahazo ny fahamendrehana avo lenta izay antenainao avy amin'ny Tidal ianao amin'ny fahitalavitrao. Topazo maso ireo horonan-tsary, kaonseritra farany ary mankafiza ny horonan-tsarinao amin'ny HD. Henoy ny rakikira sy hira farany avy amin'ny mpanakanto tianao. Izany rehetra izany dia avy amin'ny sakafo an-trano.
Tahaka ny Apple Music sy Spotify, Tidal dia serivisy mozika miorina amin'ny famandrihana izay mamela ny mpampiasa hilalao mozika sy hijery horonan-tsary amin'ny fangatahana amin'ny vidiny 9,99 euro isam-bolana ho an'ny kalitaon'ny feo mahazatra. Fa tsy toy ny Apple Music sy Spotify, Tidal dia manolotra serivisy ho antsika 19.99 euro isam-bolana izay manome antsika a Kalitaon'ny feo tsy fivadihana tsy misy fatiantoka ho an'ireo mpamandrinao.
Tsy ny Apple TV ihany no fitaovana nahazo ny fampiharana mankafy ireo horonantsary ireo, satria misy fitaovana miaraka aminy Android TV, efa nahazo ity rindrambaiko ity koa ianao afaka mankafy mivantana amin'ny fahitalavitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Azo atao ao amin'ny Apple TV izao ny serivisy mozika streaming tidal
Ny lalao hazakazaka F1 2012 dia azo jerena ao amin'ny Mac App Store amin'ny vidiny 5,49 euro